Tmate: govera yako terminal ipapo nemunhu, chero kupi | Linux Vakapindwa muropa
Tmate: govera yako terminal ipapo nemunhu, chero kupi
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Zvirongwa
Tora iwe pachako chirongwa chinopa imwe sarudzo sedzimwe dziripo, pakati padzo pane inozivikanwa Guacamole, TigerVNC, TeamViewer, nezvimwe. Basa rayo kugovana yako terminal nechero rimwe timu uye kubva chero kupi, zvinonyanya kukosha kugovana yedu terminal nevatinoshanda navo kana neshamwari nevatengi. Aya mapurogiramu anoshandiswa kuitira kuti vamwe vagone kuona komputa yedu uye nekudyidzana nesystem yedu.
Asi Tora pachako chinhu chakakosha, sezvo ichingoshanda chete kugovana terminal hwindo, uye hapana chimwe chinhu. Ndezve forogo yeiyo inozivikanwa tmux, iyo yekupedzisira multiplexer iyo inokutendera iwe kushandisa akati wandei zvirongwa ine imwechete terminal sekunge isu taive tine akati wandei. Ose ari maviri anogona kuve pane imwechete komputa panguva imwe chete, ndiko kuti, hazvipindirane, asi musungwa haatarise pamabasa akafanana netmux, inongogovera yedu yekupedzisira skrini.
Tmate ichavamba kubatana kwakachengeteka kuburikidza neSSH kune webhusaiti ye tmate.io uye ichagadzira isina kujairika URL yechikamu chega chega. Iwe unogona kugovera iyo URL kune chero waunoda, chero bedzi chiri chekuvimba kwako kuitira kuti vagone kubatana kuburikidza neiyi link kune yedu terminal. Kana iko kubatana kuri kushanda, ivo havangakwanise chete kuona kwedu terminal, asiwo kuyanana nayo kana kuita kure kure manejimendi sisitimu yedu seSSH. Izvo zvinoenderanawo neGNU / Linux, MacOS uye BSD.
Iwe unogona kuiwana mune yepamutemo marekodhi eiyo main distros uye nekuisa iwo zvakachengeteka nemidziyo yekugadzirisa maturu. Kamwe yaiswa, unogona kushandisa yakapusa tmate raira kutanga kubatana uye kugovana nayo kune chero watinoda. Iine iyo yakapihwa URL, tinogona kuita kubatana kubva kune chero komputa ine URL yedu. Kuti uwane rumwe ruzivo iwe unogona kubvunza bhuku rechishandiso nemurume musungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Tmate: govera yako terminal ipapo nemunhu, chero kupi
Lightweight Linux kugoverwa